Warshadaynta - Sorrento Therapeutics
Wax-soo-saarka Garsoorka (Ka-hortagga unugyada, Daaweynta Unugyada)
Qalabka casriga ah ee cGMP antibody iyo xarunta wax soo saarka daawaynta unugyada oo ku taal San Diego, CA, markii hore loogu talagalay inay noqoto xarun badeecooyin badan leh oo loogu talagalay soo saarista borotiinno la safeeyey iyo unugyada difaaca jirka si loogu isticmaalo daawayn ahaan. Xarunta dib loo habeeyay waxa ay buuxisay shuruudaha cGMP ee lagu dabaqi karo ee soo saarista Daawooyinka Cusub ee Baadhista, oo hadda waxa ku jira awoodaha daawaynta gacanta.
Buuxinta iyo Dhamaystirka Dhismaha Qandaraaska Bioserver Aseptic
Hadda qayb ka mid ah awoodaha asaasiga ah ee Sorrento, Bioserv, oo ah hay'ad adeeg soo saara qandaraas cGMP ayaa la helay oo la isku daray. Iyada oo leh tas-hiilaadka / qolalka nadiifinta iyo nidaamyada tayada qaangaarka ah, Bioserv waxay bixisaa adeegyada buuxinta aseptic iyo kuwa aan-aseptic-ka ahayn oo ay ku jiraan lyophilization ee bayotechnoolajiyada, warshadaha dawooyinka iyo ogaanshaha, iyo sidoo kale calaamadaynta / qalabka iyo heerkulka qolka muddada-dheer la kantaroolay, kaydinta qabow iyo barafaysan.
Camino Santa Fe Xarunta Soo saarista Fayraska Oncolytic
Xarunta wax-soo-saarka fayraska ee Sorrento waxaa ka mid ah horumarinta habka iyo shaybaarrada baaritaanka falanqaynta iyo sidoo kale cGMP qolal nadiif ah. Hawlgallada la taageero waxaa ka mid ah dhaqanka unugga, nadiifinta, buuxinta iyo dhammaynta hababka iyo sidoo kale horumarinta qiimaynta falanqaynta iyo hubinta tayada tayada. Xarunta waxa shati ka siisay CA Laanteeda Cunnada iyo Dawooyinka waxayna si guul leh u soo saartay walxaha daroogada iyo alaabada dawooyinka loogu talagalay tijaabooyinka caafimaad ee ka hor, WAJIGA I iyo FASIGA II.
Isku xidhka ADC, Culayska Bixinta iyo Xarunta Isku-xidhka Isku-xidhka
Sorrento waxay ku shaqeysaa xarunteeda cGMP ee wax soo saarka Antibody Drug Conjugate (ADC) ee Suzhou, Shiinaha, iyadoo hoos timaada magaca astaanta Levena Biopharma. Goobtu waxay shaqaynaysay ilaa 2016 waxayna taageeri kartaa soosaarka cGMP ee dawada isku xidha iyo sidoo kale isku xidhka antibody. Iyada oo leh awood taageero falanqayn buuxda iyo xarun u qalabaysan in ay wax ka qabato API aad u awood badan (go'doomiya), goobtu waxa ay taageertay in ka badan 20 dufcadood oo bukaan-socod ah oo tijaabooyin caafimaad oo caalami ah.
Xarunta Cilmi-baarista iyo Wax-soo-saarka ee Sofusa
Awoodaha wax soo saarka SOFUSA ee Atlanta, GA waxaa ka mid ah farsamooyinka nanofabrication saxda ah oo ay weheliyaan isu imaatinka iyo tijaabinta qaybaha qalabka. Qalliinku waxa uu awood u leeyahay in uu taageero soo saarista aaladaha gaarka ah si loo taageero labada daraasadood ee hore iyo tijaabooyinka bukaan-socodka ee Wajiga I iyo II. Intaa waxaa dheer, xarunta cilmi-baarista ee SOFUSA waa shaybaar xayawaanno yaryar oo si buuxda u shaqeynaya oo leh awood-muuqaal casri ah (NIRF, IVIS, PET-CT) si ay si buuxda u qeexdo saameynta bixinta lymphatic marka loo eego irbado dhaqameed iyo faleebo.